ओलीलाई आयो सरकार ढाल्ने चेतावनी, पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई भयो चिन्ता, अब के गर्लान प्रचण्ड ? — Imandarmedia.com
ओलीलाई आयो सरकार ढाल्ने चेतावनी, पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई भयो चिन्ता, अब के गर्लान प्रचण्ड ?
काठमाडौं । सरकारले अघि बढाएको गुठी विधेयक खारेजीको माग गर्दै ज्यापु महागुठीले काठमाडौमा प्रदर्शन गरेको छ । काठमाडौंको बसन्तपुरबाट ज्यापु महागुठीलगायतका विभिन्न धार्मिक तथा सांस्कृतिक संघ–संस्थाले गुठी विधेयक खारेजीको माग गर्दै प्रदर्शन गरेका हुन् । प्रदर्शनमा सहभागी भएकाहरुले सरकारले धार्मिक, सांस्कृतिक र परम्परामाथि हस्तक्षेप गरेको भन्दै विधेयक खारेज नगरे कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।
उनका अनुसार यस्तो संवेदनशील विषयमा आवश्यक सुधार र परिमार्जनको दायित्व पनि सम्बन्धित गुठीहरुकै भएको धारणा पनि पूर्वराजाले व्यक्त गरेका थिए । सरकारका प्रवक्ता सञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटाले गुठी परम्परा सामन्तवादको अवशेष रहेकोले यसलाई समाप्त गर्न सरकार दृढ रहेको बताएका छन् भने ८० भन्दा बढी गुठीरूले संयुक्त संघर्ष समिति गठन गरी विगत ६ दिनदेखि राजधानीमा विरोध प्रदर्शन गर्दै आएका छन् ।
किन आन्दोलित भए गुठियार ?
सरकारले गुठी व्यवस्थापनका नाममा हजारौं रोपनी जग्गा ‘भू–माफियालाई पोस्न मिल्ने गरी’ ल्याउन लागेको कानुनविरुद्ध काठमाडौं उपत्यकाका गुठियार तथा स्थानीय आन्दोलित भएका हुन्।
कम्तिमा पन्ध्र सय वर्षअघि लिच्छवि कालदेखि अनवरत चल्दै आएको गुठी परम्परालाई राज्यको स्वामित्वमा ल्याएर ‘जग्गा हडप्ने दाउ गर्दै’ सरकारले उक्त कानुन ल्याउन लागेको हो। यसको विरोधमा आइतबार दिउँसो माइतीघर मण्डलमा काठमाडौंका सयौं स्थानीय गुठियारले साँस्कृतिक बाजागाजासहित प्रदर्शन गरे। उक्त प्रदर्शनमा सरकार आक्रामक रूपले खनियो।
जब सयौं वर्षदेखि गुठी व्यवस्थापन गर्दै आएका सम्बन्धित गुठियारहरू नै प्रस्तावित कानुनविरुद्ध छन् भने फिर्ता लिनुको साटो जसरी भए पनि पारित गराउन सरकार किन उद्यत छ? विधेयकमा त्यस्तो के प्रावधान छ, जसलाई पारित गराउन नपाउँदा सरकार यतिविधि तिल्मिलाएको छ?
यही प्रश्नको उत्तर खोज्न हामीले गुठीसम्बन्धी उक्त विधेयकका प्रावधान केलाउन खोजेका छौं। यो विधेयक जस्ताको तस्तै पारित भए गुठीका नाममा रहेको हजारौं रोपनी जग्गा भू–माफियालाई सुम्पन बाटो खुल्ने पशुपति विकास कोषका पूर्व सदस्य–सचिव गोविन्द टन्डन बताउँछन्।
यस्तो प्राधिकरणले गुठीका चल–अचल सम्पत्ति प्राप्त गर्न, भोग गर्न र आवश्यकताअनुसार बेचबिखन गर्न सक्छ। विधेयकको दफा ३ र २३ मा यससम्बन्धी व्यवस्था उल्लेख छ। विधेयकको सबभन्दा गलत प्रावाधान यही हो। यसले अहिलेसम्म स्थानीय गुठियारहरूद्वारा सञ्चालन र व्यवस्थापन गरिँदै आएको गुठी र मातहतका सम्पत्तिलाई प्राधिकरणको स्वामित्वमा लैजानेछ।
प्राधिकरणको संरचना सरकारी संस्थानजस्तो छ, जसको सञ्चालक समितिमा कानुन तथा न्याय, गृह, संस्कृति लगायत मन्त्रालयका सचिवहरू रहनेछन्। यसरी नयाँ कानुनले गुठी सञ्चालनको अभिभारा स्थानीय गुठियारहरूका हातबाट खोसेर सरकारी कर्मचारी, सरकारले नै नियुक्त गरेको प्रमुख कार्यकारी, पुजारी, महन्त लगायतलाई सुम्पन खोजेको छ।
‘एउटा गुठियार हुँदा त समस्या छ भने अब १० वटा गुठियार भएपछि को जवाफदेही हुने? कसको कुरा सुन्ने? कसको कुरा मान्ने?’ उनले भने। दोस्रो, विधेयकको दफा १८ ले प्राधिकरणका नाममा अक्षय कोष स्थापना गर्ने भनेको छ। गुठीका तैनाथी जग्गा बिक्रीबाट प्राप्त हुने रकम उक्त अक्षय कोषको स्रोत हुनेछ।
तैनाथी भनेको मोही नलागेको जग्गा हो। यस्तो जग्गा तराईमा धेरै छ। विधेयकको यो प्रावधान जस्ताको तस्तै पारित भए न्यूनतम मूल्य तिरेर जोसुकैले गुठीको जग्गा किन्न बाटो खुल्नेछ। यसबाट गुठीको स्वामित्वमा रहेको जग्गा–जमिन भू-माफियाका हातमा जाने सम्भावना प्रबल रहेको टन्डन बताउँछन्।
यति मात्र होइन, विधेयकको यही दफाले गुठीको स्वामित्वमा रहेको जग्गा रैतानी जग्गामा परिणत गर्ने व्यवस्था पनि गरेको छ। गुठीका जग्गा रैतानी गर्दा दुरुपयोग भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले २०६५ वैशाख ११ गते रोक्ने फैसला गरेको थियो।
यो विधेयकले सर्वोच्चको उक्त फैसला उल्ट्याउन खोजेको छ। यसले पनि भू–माफियाहरूको निम्ति गुठी जग्गा हडप्न बाटो खुल्ने टन्डन बताउँछन्। तेस्रो, विधेयकको दफा ४ (च) मा निजी गुठीलाई सार्वजनिकमा परिणत गरी सञ्चालन गर्ने–गराउने व्यवस्था छ।
सार्वजनिकीकरणका नाममा सरकारले गुठीमा त्यस्तै नियति दोहोर्याउन खोजेको छ, जसले काठमाडौंका थुप्रै साँस्कृतिक गतिविधि धराशयी हुनेछन्। चौथो, यो विधेयकले गुठी वा धार्मिक स्थल स्थापना गर्न सरकारको स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
पाँचौं, विधेयकको दफा २७ ले आम्दानीका आधारमा मन्दिर तथा धार्मिक स्थलहरूलाई छवटा समूहमा वर्गीकरण गरेको छ। ‘मठ-मन्दिरलाई महत्वका आधारमा वर्गीकरण गर्नुपर्नेमा आम्दानीका आधारमा छुट्टयाएर नाफामूलक प्रतिष्ठानजस्तो बनाउन खोजिएको छ,’ टन्डनले भने, ‘के अब मन्दिरलाई पनि राज्यले कमाइ खाने भाँडो बनाउँदै ठेक्कामा चलाउन खोजेको हो?’
मठ–मन्दिरमा यस्तो ठेकेदारी प्रथा भित्र्याउने सरकारको नियतले धार्मिक आस्था र धार्मिक स्थलको महत्व नाश हुने उनले बताए। छैठौं, विधेयकको दफा ३१ ले धार्मिक स्थल परिसरमा छायांकन वा अन्य क्रियाकलाप गर्न तथा धार्मिक स्थलका नाममा कम्पनी, फर्म वा उद्योग खोल्न छुट दिएको छ।
यसले धार्मिक स्थललाई मुनाफाखोर कम्पनीमा परिणत गर्ने टन्डन टिप्पणी गर्छन्। अधिवक्ता भरत जंगम पनि गुठीहरूको संरक्षण र व्यवस्थापनका दृष्टिले विधेयकका प्रावधान त्रुटिपूर्ण रहेको बताउँछन्।
‘यो विधेयक सरासर हाम्रो धर्म र गुठीको अमूर्त सम्पदा मास्ने उद्देश्यले आएको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘कार्यान्वयन हुने हो भने सनातनदेखि चलिआएको धर्म–संस्कृति सबै सकिन्छ।’ गुठी भनेको यस्तो संस्था हो, जसले नेपालको मौलिक मूर्त-अमूर्त सम्पदा जोगाउँदै आएको छ।
यसको सुरुआत लिच्छविकालमै भएको इतिहास छ। यो संस्कृतको ‘गोष्ठी’ शब्दबाट आएको हो, जसको अर्थ हो समूह। समूहमा मिलेर पूजाआजा गर्ने, चाडपर्व मनाउने तथा अन्य कार्य गर्ने संस्था नै ‘गुठी’ हो। गुठी मातहत जग्गा–जमिन जोड्ने चलन पनि परम्परागत रूपले चलिआएको पाइन्छ।
‘हाम्रा पुर्खा दुरदर्शी थिए, गुठीअन्तर्गत कहिल्यै नमासिने जग्गा-जमिन जोडे,’ उनले भने, ‘अहिले आएर त्यही जग्गा–जमिनमा सबैका आँखा लागे।’ परम्परादेखि चल्दै आएको गुठी संस्कृतिमाथि राज्यको हस्तक्षेप नयाँ होइन। विगतमा पनि पटक–पटक राज्यबाट गुठी मास्ने कार्य भएका छन्।
पहिलोपटक विक्रम सम्बत् १८६२ मा तत्कालीन राजा रणबहादुर शाहको पालामा गुठीमाथि अतिक्रमण भएको टन्डन बताउँछन्। त्यति बेला रानी कान्तिवती बिरामी परेकी थिइन्। धामी–झाँक्री देखाउँदा पनि उनको ज्यान बचाउन नसकेपछि राजा रणबहादुरले ‘गुठी, दान, धर्म भनेको मिथ्या हो’ भन्दै गुठी विनाश गर्न थालेको इतिहास छ।
जंगबहादुरको पालामा यो परम्परामाथि अझ बढी अतिक्रमण भयो। गुठीका जग्गा राणाहरूले जबर्जस्ती अधिकरण गर्न थाले। केही ठाउँमा यसै भोगचलन पनि सुरू गरे। ‘जग्गा भएर मात्र अहिलेसम्म यति बचेको हो, सुनचाँदी वा पैसा भएको भए उहिल्यै गुठीहरू टाट उल्टिसक्थे,’ टन्डनले भने।
२०२१ सालमा गुठी संस्थान स्थापनापछि त राज्यबाट विधिवत् रूपमै अतिक्रमण सुरू भयो। संस्थान स्थापनापछि मठ–मन्दिरको जग्गा हेर्ने मोहीनाइके खारेज गरियो। मोहीनाइकेले जग्गाको साँध–सिमाना रखवारी गर्थ्यो। ऊ नभएपछि अतिक्रमण ह्वात्तै बढ्यो।
यति मात्र होइन, संस्थान आफैंले गुठीका नाममा रहेको सामुदायिक जग्गा व्यावसायिक प्रयोजनमा ल्याउन थाल्यो। धेरै ठाउँमा गुठीका जग्गा हडपेर ठूल्ठूला व्यावसायिक भवन बनाउन भाडामा दिइयो। यो क्रम जारी छ। असनको कोथु ननीस्थित मल्लकालीन ‘घडीघर’ भत्काएर व्यावसायिक कम्प्लेक्स बनाउने योजना गुठी संस्थानकै हो। स्थानीयको विरोधका बाबजुद संस्थान आफ्नो योजनाबाट पछि हटेको छैन।
गुठी व्यवस्थापन गर्ने यस्तो विधेयक तालुकवाला संस्कृति मन्त्रालयबाट तयार गर्नुपर्नेमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय संलग्न हुनुले भू–माफियाहरू सक्रिय भएको शंका जन्माउँछ। गुठीसम्बन्धित जानकारी सेतोपाटीबाट